Otu esi etinye Google Chrome Stable, Beta, ma ọ bụ na-adịghị akwụ ụgwọ na Fedora 34/35 - LinuxCapable
October 12, 2021 October 8, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Google Chrome Beta / anaghị akwụsi ike
Google Chrome bụ sọftụwia Internet Explorer kacha eji n'ụwa, yana mmelite na nso nso a na 2021 na Chrome bụ ihe nchọgharị bụ isi nke ndị ọrụ ịntanetị karịrị ijeri 2.65. Otú ọ dị, dị ka ị ga-ama, mgbe ị wụnye Fedora, ọ bụ naanị Mozilla Firefox ka a na-ejikọta ya na nkesa ma ọ dị mma, ịwụnye Google Chrome bụ ọrụ kwụ ọtọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Google Chrome na Fedora.
OS akwadoro: Fedora Linux 34 ma ọ bụ 35 (Ụdị ọhụrụ ga-arụkwa ọrụ)
Nzọụkwụ mbụ ị ga-achọ ime bụ download na igodo GPG maka nrụnye Google Chrome. Iji mee nke a, mee ihe ndị a wget iwu:
Maka sistemụ dabere na Fedora, ngalaba nchekwa atọ ugbu a kwesịrị ka ebudata ya n'otu n'otu ka etinyere na sistemụ gị. Ozugbo etinyere ya, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ị gaghị adị mkpa ka ibudata ha ọzọ ka imelite Chrome n'ọdịnihu.
Iji gosi na nrụnye Chrome gara nke ọma n'ịgbakwunye ebe nchekwa na ndepụta nchekwa gị na Fedora. Biko mee iwu dnf repolist na-esonụ iji hụ na agbakwunyere ma na-arụ ọrụ.
The oge mbụ Ị mepee Google Chrome, ị ga-enwe mmapụta na-esonụ:
A ga-akpali gị ịbanye, mafee nke a, ma ọ bụ banye na nhọrọ. Mgbe ahụ, ị ​​​​ga-ahụ ihe nchọgharị Internetntanetị Google Chrome n'ikpeazụ dị ka n'okpuru:
Ekele, ị tinyela Google Chrome na sistemụ arụmọrụ desktọpụ gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ma bubata igodo GPG na ebe nchekwa, wee tinye ụdị kwụsiri ike nke Google Chrome na Fedora. N'ozuzu, Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị eji na mbara ala, yana 70% nke ndị ọrụ na-eji ya. Cheta, ọ nwere ike bụrụ otu n'ime ihe nchọgharị ịntanetị a na-achọkarị maka nrigbu ụbọchị efu. Debe ya ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-adịkwa mma.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Nchọgharị Google Chrome Mail igodo
Otu esi etinye koodu Visual Studio (koodu VS) na Fedora 34/35